Wararka - Waa maxay saddexda suuq ee ugu waaweyn ee alaabada carbide tungsten?
Ulaha Carbide adag
Ulaha Carbide oo leh dalool qaboojiye
Ulaha Carbide-ka oo leh Laba Dalool Helix
Qalabka Tungsten Carbide
Mashiinnada Carbide CNC
Tungsten Carbide Disk & Sawirada Blades
Tungsten Carbide Qaybo ka kartoo
Waa maxay saddexda suuq ee waaweyn ee wax soo saarka carbide tungsten?
Waa maxay saddexda suuq ee waaweyn ee alaabada carbide tungsten hadda? Qaybaha adag ee adag waxay qabsadaan baabuurta, caafimaadka, suuqa tamarta cusub, ma aaminsan tahay? Ma ogtahay Fadlan aan maanta kuu soo bandhigo.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa qaybta gawaarida. Kadib qaabaynta, xoqida, birta ama budada iskujirta iyo habab kale si loo soo saaro qaybo carbide ka samaysan oo loo isticmaalo warshadaha kala duwan. Ka dib 70 sano oo horumar ah, qaybaha carbide ee sibidhka ah ayaa si tartiib tartiib ah looga soo saaray ka bedelida qaybaha birta ee xoogga hooseeya iyo sifooyin fudud oo fudud si ay u awoodaan inay bedelaan kabka iyo qaybaha been abuurka oo leh qaybo xoog sare leh isla markaana noqdaan bedel wax ku ool ah oo loogu talagalay farsameynta ama shubka qaybo.
Wershadaha hoose ee carbide shamiintoodu waxay noqon karaan qaybo baabuur, qaybo mootooyin ah, qaybo kombaresarada iyo qalab kale ah, marka laga eego dhinaca warshadaha qaybaha mashiinada carbide ee sibidhka leh, suuqa ugu weyn ee tungsten carbide iibka alaabtu waa warshadaha baabuurta, tikniyoolajiyadda carbide sibidhka ah. qaybo, shuruudaha tayada ugu sarreeya ee suuqa.
Waqtiga boostada: Nofeembar-27-2020
Cemented Carbide Endmill, Carbide Cemented, Qalabka Carbide, Dhuxulada Dhamaadka Carbide Solid, Mashiinka Mashiinka, Qalabka Jarista Carbide,